Zvirevo uye Chigadzirwa Management | Martech Zone
China, June 29, 2006 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Hazviwanzo kuti ini ndinotarisa kune chinyorwa kune kurudziro yezvigadzirwa manejimendi uye kuvandudzwa kwesoftware, asi nhasi shamwari yanditumira mamwe mazwi makuru ezano:
Anochengeta kurairirwa, ari panzira youpenyu; Asi anoramba kurairirwa, anotsauka.
Zvirevo 10: 17
Anoda kurairirwa, anoda zivo; Asi anovenga kurairwa ibenzi.
Zvirevo 12: 1
Urombo nokunyadziswa ndiwo mubayiro woanoramba kurairwa; Asi anoteerera kurairwa achakudzwa.
Zvirevo 13: 18
Mashoko ari nani aisakwanisa kutaurwa. Dzidza zvakawanda, vhura, bvuma kushoropodzwa, uye dzidza kubva pane zvaunokanganisa.
Tags: kururamisamurayiridzoRuzivochigadzirwa manejimendizvirevo